Semolina ခုတ် - သူငယ်တန်းအတွက်ဂျယ်လီနှင့်အတူတစ်ကြော်ဒယ်အိုးထဲမှာနှင့်မီးဖိုသို့တူသောချက်ပြုတ်နည်းများ
Semolina ခုတ် - ကလေးတွေအဘို့အရသာချက်ပြုတ်နည်းများနေ့တိုင်း
semolina ကနေဂျုံယာဂု - အသုံးဝင်သောနှင့်အရသာရှိတဲ့ဟင်းပေမယ့်အားလုံးကလေးတွေသူ့ကိုမချစ်, များစွာသော moms တစ်ခုချင်းစီကိုဇွန်းအဘို့အကျွမ်းတဝင်နံနက် "စစ်တိုက်" ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော kapriznikov ဖြစ်လာအံ့သြလောက်အောင်အရသာ semolina ခုတ်ကျွေးဘို့ Excellent ကထွက်ပေါက်။ မနေ့ကရဲ့ဂျုံယာဂု၏အကြွင်းအကျန်အဖြစ်အလွန်လွယ်ကူစွာသူတို့ကိုချက်ပြုတ်နှင့်လောလောလတ်လတ်ပြင်ဆင်ကြ၏။
semolina ကနေအရသာရှိတဲ့ဘာဂါအောင်, သာ semolina, နို့နှင့်သကြားလိုအပ်သည်။ ဂျယ်လီနှင့်အတူ - စပျစ်သီးပျဉ်, အခြောက်လှန်းအသီးအပွ, မုန်လာဥနီ, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ, အရသာစာရွက်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဒယ်အိုးအဖြစ်ပါသို့မဟုတ်မီးဖိုတဖို၌ပြင်ဆင်ထားရန်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်ပါတယ်။ သငျသညျလျော့နည်းသကြားထားပြီးတော့, savory dazzle နိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိစားဖိုမှူးထံမှအနည်းငယ်ချက်ပြုတ်လျှို့ဝှက်ချက်များ:
ဂျုံယာဂုမှဖုမရှိဘဲလှည့်, သင်ကပါးလွှာသောစမ်းချောင်းများတွင်ပြုတ်နို့နှင့်အတူသီးနှံသွန်းလောင်းရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးလက်ယာရစ်ဦးတည်ချက်၌ဤလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့အရည်အတွက်။ ထူသည်အထိအဆက်မပြတ်မွှေ, 3-5 မိနစ်ချက်ပြုတ်။
semolina ထံမှ meatballs စိုစွတ်သောလက်တို့ကိုဖွဲ့စည်းရန်, ထို့နောက်အရောအနှောကပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အထူ - 1.5 မီလီမီတာထက်မပိုသောကြောင့်ကြော်ဖို့ကောင်းလှ၏။ ဒါဟာဘောလုံးရဲ့ပုံစံကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါရေနံချက်ပြုတ်ပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဂျုံယာဂုထည့်သွင်းထားသည်။ စပျစ်သီးပျဉ်, ဒိန်ခဲနှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ - နည်းတူအေး။
အဆိုပါဂျုံယာဂုနှိုးဆော်, လိုအပ်နေလောင်း whisk, လောင်းမတိုင်မီကြက်ဥ။
ဂျုံယာဂုလည်းထူသို့မဟုတ် lumpy လှည့်မှန်လျှင်, semolina meatballs တစ်ဦး Blender အတွက်အရောအနှောရိုက်နှက်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျဒိန်ခဲ add လျှင်ပန်းကန်, ထိုအာခေါင်အပေါ်ပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ပါလိမ့်မည် - ချိုမြိန်အတွက် frayed ဝတ်စုံကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်မှ savory ။
Semolina ခုတ် - တကြော်ဒယ်အိုးထဲမှာတစ်စာရွက်
သူတို့ကိုမုန့်ညက်, မုန့်အစအနသို့မဟုတ် semolina ခြောက်သွေ့တဲ့ထဲမှာလှိမ့်ကြော်မတိုင်မီဒယ်အိုးထဲမှာ semolina ထံမှ meatballs လုပ်ရဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးပထမဦးဆုံးတဦးတည်းအနံ့ကဲ့သို့ချက်ပြုတ်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ထောပတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအချဉ်မုန့်, နို့ဆီသို့မဟုတ်ယိုနှင့်အတူရိုးရာအစားအစာဆောင်ရွက်ပါသည်။
နို့ - 300 ml ကို;
semolina -7အနုပညာ။ ဇွန်း,
သကြား -6ဇွန်း။ ဇွန်း,
အဆိုပါ semolina ချက်ပြုတ်။ အဆိုပါနို့, semolina နဲ့သကြားအရောအနှောကိုလောင်းထူသည်အထိမီးပေါ်မှာကိုင်ထားအနာဆိုး။ အေးမြကောင်းစွာရောနှော, ကြက်ဥကိုမောင်း။
Semolina မုန့်ညက်အတွက်လှိမ့်, Patti ဖွဲ့စည်းရန်။
ဂျယ်လီနှင့်အတူ Semolina ခုတ် - စာရွက်
ဂျယ်လီနှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစား semolina ခုတ်, ကသီးခြားစီပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်။ အခြေခံအဖြစ်ကဒီစာရွက်, သင်အဆင်သင့်လုပ်ဆန်, ပြောင်းဆန်သို့မဟုတ် oatmeal ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှောရရှိရန်, သူမ၏ Blender whisk ။ ဆီဥကို stack မှပထမဦးဆုံးစက္ကူသုတ်ပဝါပေါ်အဘို့ဆောင်သောပွဲပြန့်ပွား roasting ပြီးနောက်။
နို့ - 0.5 ဌ;
သကြား -4tbsp ။ ဇွန်း,
မုန့်ညက် - 50 ဂရမ်,
ကြက်ဥ - 1 pc;
သီး - 1 ခွက်ကို;
ရေ - 1 ခွက်ကို;
ထောပတ် - 50 ဂရမ်,
ကစီဓါတ် - 1 tbsp ။ ဇွန်း။
ယင်းဂျယ်လီအနာစိမ်းရေအဘို့, သီးနှင့်သကြားထားတော်မူ၏။ ယင်းကစီဓါတ်ပျော်ဖို့ရေအေးထဲမှာတစ်ဦးအဖျော်ယမကာသို့သွန်းလောင်း။ ထူသည်တိုင်အောင်, မီးမိနစ်အနည်းငယ်ကိုင်ထားပါ။
အဆိုပါမျြးစိမျ့စိမျ့ဂျုံယာဂုကြက်ဥရောနှောသွန်းလောင်း။ meatballs semolina မှတင်ဒါအထဲကလှည့်နှင့်အရောအနှော Blender ကြာပွတ်နေသည်။
မီးဖို၌ Semolina ခုတ် - စာရွက်
သငျသညျအချိန်ရှိသည်ဆိုပါက semolina စေရန် သာ. ကောင်း၏ မီးဖို၌ခုတ်, ထို့နောက်သူတို့ပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်ပိုပြီးစိမ်းလန်းစိုပြေရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးဗားရှင်းပါမယ်ဒီပန်းကန်မနေ့ကရဲ့ရှုပ်ထွေးထုတ်ပစ်ဖို့မစှဲခြှတော Cook ကတီထွင်ရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကား, မနက်စာမကြာခဏလေးတွေများအတွက် Menu ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူငယ်တန်း၌ရှိသကဲ့သို့, ဤအတွက်အချိုးအစားနှင့်အမှန်တရား။
semolina -6ဇွန်း။ ဇွန်း,
Vanillin - 1 အထုပ်;
မုန့်ညက် -3tbsp ။ ဇွန်း,
အခြောက်လှန်းချယ်ရီသီးနဲ့အုန်းသီးရိတ် - 1-2 tbsp ။ ဇွန်း။
ကြက်ဥ, မုန့်ညက်နှင့် vanilla ချထားပါ, အခြောက်လှန်းချယ်ရီသီး, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှိုးဆော်။
ပူပြင်းတဲ့မီးဖိုတဖို၌ဖုတ်, ရွှေအညိုရောင်သည်အထိ, 180 ဒီဂရီ preheated ။
semolina ထက်လျော့နည်းဘဲ, အကလေး၏ခန္ဓာကိုယ်အသုံးဝင်သောမုန္လာဥနီသည်ဗီတာမင် A တွေအများကြီးကဟေမိုဂလိုဘင်ကိုတိုးပွားစေတော်မူသော, beta-carotene နှင့်ဗီတာမင် B ကပါဝင်သည်။ မုန်လာဥနီ - သင်အတိုင်းဤစာရွက်၏မှတ်ချက်ကိုယူသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်, အပူကုသမှုကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများဆုံးရှုံးမအနည်းငယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏တဦးတည်း ခုတ်မုန်လာဥ semolina အတူ။
မုန္လာဥနီ - 600 ဂရမ်;
semolina -4tbsp ။ ဇွန်း,
သကြား -4tbsp ။ ဇွန်း။
သကြားနဲ့ semolina Add ကောင်းမွန်စွာရောမွှေပါ။
Patti ဖွဲ့စည်းရန်, မုန့်ညက်သို့မဟုတ် semolina အတွက်လှိမ့်။
ရွှေအညိုသည်အထိကြော်, ထို့နောက်နိမ့်အပူပေါ်အခြား 10 မိနစ်ကိုင်ထားပါ။
နှစ်ဦးစလုံးသူငယ်တန်းအတွက် Semolina ခုတ်,
နှစ်ဦးစလုံးသူငယ်တန်းအတွက် semolina ကနေကွတ် meatballs - များစွာသောလူကြီးများ၏အိပ်မက်, ဒီစာရွက် restore ဖို့ကြိုးစားနေမကြာခဏငယ်ရွယ်မိခင်များ။ ဒါပေမယ့်အဓိကလျှို့ဝှက်ချက် - နူးညံ့သိမ်မွေ့သော semolina နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့, ရွှေအပေါ်ယံလွှာထဲတွင်တစ်မူထူးခြားသောအရသာဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန် breadcrumbs နှင့်အတွက် semolina လိပ် cutlets လျှင်လွယ်ကူသည်။
semolina - 0.5 ခွက်;
နို့ - 0,5လီတာ;
သကြား -3tbsp ။ ဇွန်း,
ထူဂျုံယာဂုကိုက်ညီမှုချက်ပြုတ် "ဟုအဆိုပါဇွန်းမှရပ်နေကြ၏။ " cool ။
Form ကိုဘောလုံး, breadcrumbs နှင့်ထဲမှာလိပ်။
သငျသညျဖွာသီးသူတို့နှင့်အတူ file လျှင်ကလေးများကဲ့သို့အ Semolina အရသာရှိတဲ့ဘာဂါ။
အထောကျအကူမြားနှငျ့သူငယ်၏အရိုးစနစ်မရှိမဖြစ်များမှာဒီထုတ်ကုန်အတွက်ကယ်လစီယမ်တွေအများကြီးကွောငျ့, ဒိန်ခဲနှင့်အတူရောနှောနေခြင်းပါလိမ့်မယ်။ လက်တစ်အက်ဆစ်ဘက်တီးရီးယား antibacterial အေးဂျင့်အူ microflora ပုံမှန်, ကယ်လစီယမ်နဲ့ဖော့စဖောရက်၏လျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်ရန်ကူညီသည်။ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲကနေအသားဘောလုံး သူတို့ဘိန်း add လျှင် semolina အများကြီး tastier ဖြစ်လိမ့်မည်။
နို့ -2ခွက်,
semolina - 1 ခွက်ကို;
ထောပတ် - 200 ဂရမ်;
ဘိန်း -2tbsp ။ ဇွန်း။
, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့်ဘိန်းမျိုးစေ့ကိုပေါင်းထည့်ပါကြက်ဥ, ကောင်းစွာရောမွှေပါ။
တစ်ဦး semolina ဒိန်ခဲဘာဂါဖွဲ့စည်းရန်, အကင်သို့မဟုတ်မီးသင်္ဘောပေါ်ဒယ်အိုးထားတော်မူ၏။
ရွှေအညိုသည်အထိမုန့်ညက်, ကြော်အတွက်လှိမ့်ဖို့လိုအပ် Roasting ။ သင်တစ်ဦးကို double ဘွိုင်လာအတွက်ချက်ပြုတ်လျှင်, မလိုအပ်ပါဘူး passaged, 15 မိနစ်ပြင်ဆင်လော့။
Meatless meatballs semolina
အဘယ်သူသည်သားသမီးတို့အဘို့ ကြက်ဥမှမတည့်ဖြစ်ကြ , မနက်စာအဘို့ကြီးစွာသောပန်းကန်ကြက်ဥမရှိဘဲခုတ် semolina ပါလိမ့်မယ်။ အရောအနှောဖို့စိမ် semolina ယူ. , ပြိုကွဲမပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, 10 မိနစ်အမြီးအဘို့အပေါ်ပစ်ရန်နို့နှင့်ရေနှင့်ပြီနောက်ဟင်းသို့သွန်းလောင်း။ သငျသညျမီးပေါ်တွင်တင်မတိုင်မီကောင်းစွာလှုပ်ခါခြင်းနှင့်, အစဉ်မပြတ်နှိုးဆော်, ချက်ပြုတ် - ပွက်ပွက်ဆူနေသောပြီးနောက် -3မိနစ်။
နို့ -3ခွက်;
သကြား - 1 tbsp ။ ဇွန်း။
Cook ကဂျုံယာဂုချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ချိန်ကသကြားထည့်ခြင်း, semolina စိမ်။ cool ။
အဆိုပါ pudding ချက်ပြုတ်။
Patti dazzle, မုန့်ညက်အတွက်လှိမ့်။
ပြောင်းဖူး grit ၏ဟင်းချို
ကလေး courgettes အဘို့စင်ကြယ်သော
အားလုံးမိဘများသိသင့်သော 10 အန္တရာယ်အရှိဆုံးကစားစရာ
နားဆွဲ - သင့်လျော်ဖြစ်ကြပြီးဘယ်လို prodevki ဖက်ရှင်ပုတီးဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်သူနည်း
အမျိုးသမီးတွေ 2012 က Short ခေါင်းဖီး
ကုသကလေးငယ်များအတွက် Purulent ဂလင်းတမျိုး
တရားစီရငျရာနေ့ - ကနောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းကိုအပြီးမတရားသောသူဖွစျမညျဘယျနညျး
မီးလောင်သောနှုတ်ခမ်း - နိမိတ်လက္ခဏာကို